Zute EZVIZ eLife, igwefoto wifi nwere nnukwu batrị | Androidsis
Zute EZVIZ eLife, igwefoto wifi nwere nnukwu batrị
Kedu ihe ị ga -ekwu na ọ bụ Ngwa jikọtara na ekwentị anyị nke na -amalitekarị na ọganihu n'oge ndị a? Ikekwe ị nwere ike iche maka ụfọdụ ndị ọzọ, mana enweghị obi abụọ, igwefoto onyunyo ụlọ so na ngwaahịa ama ama. Taa, anyị na -ekwu maka igwefoto EZVIZ ndụ na ihe niile ọ nwere ike inye anyị. A igwefoto onyunyo wifi na anyị nwere ike ijikwa ekwentị anyị, 100% EZVIZ eLife.
Inwe sistemụ nchekwa n'ụlọ adịghị onye ọ bụla. Ọnụ nrụnye, ịghara ikwu maka ụgwọ ọnwa, anaghị ebili. Mana echiche a agbanweela nke ukwuu n'oge na -adịbeghị anya. N'ihi ụdị ngwa a, anyị nwere ike ịtụkwasị obi na sistemụ nchekwa ọgbara ọhụrụ na -enweghị mkpa maka nnukwu ego.
1 Kedu ka EZVIZ eLife si arụ ọrụ?
2 Kedu ihe EZVIZ eLife nwere ike inye anyị?
3 Nke a bụ igwefoto onyunyo batrị EZVIZ eLife
Kedu ka EZVIZ eLife si arụ ọrụ?
El na-arụ ọrụ nke ụdị igwefoto bụ dị mfe karịa ka anyị nwere ike iche. N'ezie, ọ naghị adị anyị mkpa nhazi nke ọma, ebe ọ bụ ekele ngwa zuru oke raara onwe ya nye, ị nwere ike iji ya site na nkeji otu na -enweghị ihe ọmụma tupu. Netwọk Wi-Fi n'ụlọ Ọ ga -enyere ekwentị anyị aka, ebe ọ bụla anyị nọ, debe faịlụ kpọtụrụ igwefoto oge niile.
Nweta nke gị EZVIZ ndụ na Amazon na ọnụahịa kacha mma
Site na ngwa na inyocha koodu Qr nke anyị hụrụ na igwefoto n'onwe anyị, anyị nwere ike tinye ya. Na otu ngwa, anyị nwere ike iji ya mee ihe n'uju. Anyị nwere ike igosi Edekọ ọbụlagodi n'abalị ekele maka ọhụhụ ụcha abalị dị elu. Anyị nwere ụda bi-directional yabụ ekele maka igwe okwu ya na onye na -ekwu okwu anyị nwere ike ịmekọrịta mmekọrịta.
Kedu ihe EZVIZ eLife nwere ike inye anyị?
La batrị nke ime nke igwefoto EZVIZ bụ otu n'ime ike na -eme ka ọ pụọ iche n'etiti oke ya. Anyị na -eche otu n'ime nhọrọ ole na ole anyị hụrụ n'ahịa anyị nwere ike iji na -enweghị eriri. Ọ nwere batrị nke 7800 mAh na -enye ihe ịtụnanya nnwere onwe nke ruru ụbọchị 210 enweghị mkpa ịgba ụgwọ.
Na mgbakwunye, EZVIZ eLife na -enyekwa anyị ikike nchekwa nke ya, ma nwee ya 32GB esịtidem ebe nchekwa ebe anyị nwere ike chekwaa onyonyo na foto ma ọ bụ vidiyo anyị chọrọ. ya ihe nchọpụta ngagharị na teknụzụ nchọpụta ụdị mmadụ dị elu ọ ga -eme ka anyị nwezie ikike ịchịkwa ụlọ ma ọ bụ azụmaahịa anyị.
Mkparịta ụka dị n'etiti EZVIZ eLife na ekwentị mkpanaaka anyị dị ngwa yana rụọ ọrụ nke ọma. Ọ bụrụ igwefoto na -achọpụta mmegharị ọ bụla na -enyo enyo, na -akpaghị aka see foto wee zitere anyị ọkwa. Anyị nwekwara ike idekọ igwefoto na -egbochi ozi na -akpaghị aka ma ọ bụ nụ ya na anya. Ọ dịkwa mma ịmara nke ahụ Alexa nwere ike inyere anyị aka ime ka ọ dịkwuo mfe iji. Site n'iwu olu sitere na ngwaọrụ anyị, anyị nwere ike rụọ ọrụ ma ọ bụ gbanyụọ iwu, kpọọ ozi edeburu ma ọ bụ mee njide n'oge achọrọ.
EZVIZ eLife bụ ezigbo ngwá ọrụ maka ileba anya na azụmaahịa, ọfịs, ụlọ nkwakọba ihe, ụlọ ọkachasị ... Mana anyị agaghị echegbu onwe anyị maka ihu igwe adịghị mma dịka ọ dị emebere ya na akwado ya iguzogide mmiri na uzuzu ma nwee ya a Asambodo IP66. Ogo ịdekọ onyonyo Full HD Vidiyo dị n'aka anyị n'oge ọ bụla na -ele anya na ekwentị anyị na -enweghị mkpa akụrụngwa ọzọ.
Nke a bụ igwefoto onyunyo batrị EZVIZ eLife
Anyị hụrụ igwefoto onyunyo na anyị nwere ike iji ma maka ime ụlọ na n'èzí ekele maka imewe ya, ịdị mma nke ihe ya na nguzogide ha. ya cylindrical na agba ndị ahọpụtara, isi awọ na oji, na -enye nlele ngwaahịa dị mma, ihe anyị na -akwado mgbe anyị na -ejide ya n'aka anyị. O nwere ibu, nke na agbanyeghị na ọ nwere ike ịdịtụ elu, anyị nwere ike ịtụle "ihe nkịtị" mana nkwado nkwado ma ọ bụ magnetized na -ejide ya nke ọma.
Firmlọ ọrụ EZVIZ na -enye enwere ike chaja anyanwụ nke anyị nwere ike iwunye n'akụkụ igwefoto yabụ na anyị agaghị ewepụ ya n'oge ọ bụla na nkwado ya. Anyị nwere ike iji eriri a kụọ ya na mgbidi nkwado magnetized dị ike ma dịkwa mfe ịwụnye. Yabụ mgbe anyị kwesịrị ịkwụ ụgwọ batrị, naanị ihe anyị ga -eme bụ iwepu ya na ndọta, tinye ya maka oge dị mkpa n'ọdụ ụgbọ mmiri USB Type C, wee nwetakwa nnwere onwe ya dị ịtụnanya ọzọ.
Ọ bụrụ na ị kpebiela ịnwe sistemụ nchekwa n'ụlọ, ma ị chọghị ịkwụ nnukwu ego, zụrụ ya EZVIZ ndụ na Amazon na ọnụahịa kachasị dị. Na -enwe teknụzụ niile ihe nwere ike inye anyị ka ụlọ gị ma ọ bụ azụmaahịa gị wee nwee nchekwa na nche mgbe niile. Ị nwere ike na nchekwube ị na -achọ na -enweghị mkpa maka ụgwọ ọnwa na yana n'ezie dị mfe ọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ngwaọrụ ndị ọzọ » Zute EZVIZ eLife, igwefoto wifi nwere nnukwu batrị
Ngwa atụmatụ kachasị mma iji merie na ọdọ mmiri